« Kay Fôsika » -
AccueilTresaka« Kay Fôsika »
04/10/2018 admintriatra Tresaka 0
Maro tamin’ireo mpamily fiara teto Madagasikara no voatery namono andro maromaro mihitsy, nilahatra teny amin’ireo toerana natokana hanoloana ny fahazoan-dalana, ahafahana mitondra fiara ho Biometrika. Nisy tokoa mantsy ny fanentanana niaro fanerena tamin’izany, fa tsy maintsy havaozina, ary soloina Biometrika avokoa ny « Permis de conduire, sy ny carte Grise » rehetra eto Madagasikara. Raha ny tarehimarika, dia efa ampahany vitsy amin’ireo manana fahazoan-dalana mamily sisa no tsy nahavita namadika ny azy ho Biometrika amin’izao fotoana izao.
Ankory anefa ny hagagana ankehitriny, raha nahafantatra fa tsy Biometrika indray kay ilay efa nandoavana volabe teny anivon’ireny toerana natokana nanaovana ny fanovana ireny. Izany hoe sady efa very fotoana ireo mpamily, no mbola nomena hosoka ihany koa, nefa tsy araka ny zavatra nampanantenaina no nomena azy avy eo. Raha ny nambaran’ny minisitry ny Atitany, dia tsy maintsy hosoloina amin’ilay tena izy amin’izay ity « Permis » ity, ary hosoloina maimaim-poana ny an’ireo izay efa nahavita namadika ny azy tamin’ilay « Fôsika ».
Mbola hiverina hilahatra eny amin’ireny toerana ireny indray izany ny rehetra, mandritra ny famadihana ity “Permis” tsy izy ity, ho tena Biometrika. Azo antoka ihany koa fa andro maromaro no ho lany amin’izany, raha tsy misy ny paikady matotra ataon’ireo tompon’andraikitra. Tsy ahafaly ny olona mantsy raha toa ka, sady efa nofitahina izy, no mbola holaniana fotoana indray noho ity fanovana ity tsy maintsy atao.
Na izany aza, maro amin’ireo mpitazana no midera ny toe-pon’ny Malagasy manoloana izao tranga izao. Raha tany amin’ny firenen-kafa mantsy, dia efa tsy fantatra intsony izay mety ho vokatr’izao fitaka natao tamin’ny vahoaka izao. Izany no manamarika fa mbola Hendry ny Malagasy, ka na nahatsiaro ho voafitaka aza dia manaiky hatrany izay fandaminan’ny mpitondra azy.